December 20, 2019 site HOTMAIL255 Nkume a Comment
chọrọ Mepụta Outlook Account? Mgbe isiokwu a na-enye gị zuru usoro maka Banye Up Outlook Account. E nwere ọtụtụ uru ị ga-esi eji nke a Outlook Account, otú ahụ ka m na-atụ aro na ị na ike gị Outlook Account.
Isiokwu a na-m kere na mfe ma dị mfe nzọụkwụ. Ị na-na-na ukara website njikọ ebe a, nke mere na ị na-niile ozi ke otu ebe. Soro nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro na mezue ya dị ka e kwuru na ihe ịga nke ọma Mepụta gị Outlook Account.
Ya mere, ị nwere anya si a dum post nnọọ nlezianya si n'elu na ala. Na-eso iji Mepụta Outlook Account mfe. E nwere ụfọdụ ndị dị mkpa na-nke i nwere anya mgbe tupu ị malite a Banye Up usoro.
Microsoft Outlook bụ a Personal Information Manager dị ka a akụkụ nke Microsoft Office ụlọ. Ọ na tumadi-eji dị ka ihe email ngwa. Ọ na-agụnye kalenda, ọrụ njikwa, kọntaktị manager, dee-inweta, magazin, na weebụ nchọgharị.
Gịnị bụ atụmatụ na ị na-mgbe na-eke ihe Outlook Account? Ya mere, lelee n'okpuru aha 5 ọhụrụ atụmatụ ị na-eji nke a Outlook Account.
Mma Nzute Management
Mma Time-mpaghara Management
Mma Bcc Management
Office Lens maka gam akporo
Mepụta Outlook Account | Ụkwụ na Ụkwụ site Ụkwụ na Ụkwụ Usoro
Soro nzọụkwụ banyere n'okpuru ọma Outlook Banye Up. Jiri ukara website njikọ kwuru okwu ya na iji ozugbo banye ukara website.
Pịa na nyere Outlook ukara website njikọ: www.outlook.com
ugbu a, pịa na nhọrọ “Mepụta a free akaụntụ” na-amalite Sign Up usoro.
Na ibe a, i nwere ịbanye New email na họrọ domain @ outlook.com ma ọ bụ @ hotmail.com na pịa “Osote”.
Mgbe nke ahụ mechara, tinye paswọọdụ gị oke na pịa “Osote” button.
ugbu a, ebe a ị ga-aba gị Aha mbụ na Ikpeazụ aha na ohere nyere ma pịa “Osote”.
ugbu a, i nwere iji họrọ Country / Region na unu bụ na họrọ gị Birth ụbọchị na pịa “Osote”.
N'ikpeazụ, na peeji a na i nwere ike ịbanye odide ị na-ahụ nyere ohere ọma na pịa “Osote” button.
Ị ga-ahụ na peeji nke kwuru nnọọ ka udidi. Akaụntụ gị na-kere ọma.
Dị nnọọ na-eso na ihuenyo ntụziaka nlezianya na-abanye na gị Outlook Igbe mbata.
Jide n'aka na ị Ike A ike paswọọdụ iji elu Ileba, obere, AKARA, NA pụrụ iche iji chebe gị na Outlook akaụntụ hackers.
Outlook Ahịa Care Nkọwa
Lelee n'okpuru aha ozi kọntaktị nke Outlook Ahịa Care. N'ihi na ihe ọ bụla ajụjụ, i nwere ike na-akpọ na aha na nọmba 24/7.
Toll-Free :- 1800 572 1100 /1800 102 1100 , Toll-Ṅaa :- 080 4010 3000
Gụọ isiokwu a na-na-niile na ihe ọmụma banyere usoro nke Olee otú Mepụta Outlook Account. Lelee nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na mezue usoro ọma ka Banye Up Outlook Account. Ọzọkwa, agụ atụmatụ na ị na-mgbe na-eke gị Outlook na akaụntụ.
Na-enye gị nzaghachi na gbara ajụjụ iji n'okpuru aha comment igbe. Anyị chọrọ inye ndị kasị mma isiokwu gị n'ihi ya, ọ bụ n'ezie appreciable ma ọ bụrụ na ị na-akọrọ gị nzaghachi. Ma na-eleta anyị website www-hotmail-com.email ka mgbe niile mmelite.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Debanye aha tagged With: Mepụta-ele ihe anya na akaụntụ, otú ike ele ihe anya, Debanye udidi akaụntụ